केचनकवलदेखि सगरमाथासम्म जसपा संगठन विस्तार तिब्र
२०७८ बैशाख २३, विहिबार
काठमाडौं (शेर्पाखबर) । आफूलाई वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति दाबी गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले संगठन विस्तारलाई तिब्रता दिएको छ । विशेष गरी मधेशवादी पार्टीको रुपमा प्रतित गर्दै आएको जसपा नेपालले संगठन पहाड, हिमालमा समेत तिब्र बनाएको हो ।
उक्त पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सोलुखुम्बु जिल्ला इन्चार्ज लाक्पा शेर्पाले हालै सोलुखुम्बुको खुम्बुपासाङल्हमु गाउँपालिकामा संगठन विस्तार गर्दै यसलाई पुष्टि गरे । उनले संगठन घोषणा कार्यक्रममा भने “हामी तराईदेखि हिमालसम्म संगठन तिब्र विस्तारमा छौं । तराईको केचनकवलदेखि सगरमाथासम्म हामी पार्टी संगठन विस्तार अभियानमा सफल पार्दैछौं । मुलुकभरी हाम्रो संगठन विस्तार उत्साहजनक छ । हामी उत्साहित छौं ।”
मुलुकको वैकल्पीक राजनैतिक शक्तिको रुपमा आफूहरु स्थापित भएको संगठन विस्तारको लहरबाट पुष्टि हुने अर्का केन्द्रीय सदस्य जुद्ध ढाक्रेले दाबी गरे । “जनता समाजवादी पार्टीको विचार, सिद्धान्त र नीति अन्य राजनैतिक दलको भन्दा भिन्न छ । त्यसैले, यो पार्टीमा जनआकर्षण बढेको छ । पार्टी प्रवेश गर्ने र हामीलाई माया गर्ने जनलहरले त्यो सिद्ध हुन्छ ।” नेता ढाक्रेले अघि भने “यो पार्टीमा सबै जाति, भाषा, लिंग, समुदाय, धर्मलाई समान र सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुन्छ । त्यस्तैले पनि जनलहर बढेको हो ।”
तराईमधेशमा मात्रै नभएर पहाडी क्षेत्रमा र विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा वसोवास गर्नेहरु आफूलाई राज्यले राजनैतिक अधिकार प्राप्तिबाट विमूख गरेको र राज्यको अनुभूत गराउने नीतिसहित आफूहरु अघि बढेकाले जनताको आकर्षण बढेको जसपाका नेताहरु दाबी गर्छन ।
संघीयताको जन्मदाता ठान्ने जसपाले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि जनताले वैकल्पिक शक्तिको पक्षमा वकालत गर्न थालेको बताउँछन् । पहिचानसहितको अधिकार, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्पति प्रणाली, सुशासन, समावेशी, लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणलाई अघि सारेको जसपाले जस्तो समाज त्यस्तै राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । विशेष गरी उत्पीडित वर्गका लागि आफूहरु राजनैतिक रुपमा क्रियाशिल हुने बताउने पार्टीले सुशासन, समृद्धी, संघीयता र समाजवाद भन्ने नारा अघि सारेका छन् ।
पछिल्लो समय ओखलढुंगाको खिजीदेम्बाबाट पार्टी प्रवेश र संगठन विस्तार शुरु गरेपछि देशैभर आफूहरुको पक्षमा महोल बन्दै गएको र आगामी निर्वाचनमा पार्टीले निश्चित आकार लिने पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् । एक कार्यक्रममा उनले भने “अब हामी बैकल्पीक राजनैतिक शक्तिको रुपमा स्थापित भइसक्यौं । अबको निर्वाचनमा हामी केही नभएपनि दोस्रो स्थानमा आउँछौं । जनताहरु बुझ्ने भइसके । अन्याय, अत्याचार र हिजोको जस्तो विभेदको दबदबामा सहने अवस्था अब छैन ।”
खिजीेदेम्बामा गम्बु शेर्पाको नेतृत्वमा पार्टी प्रवेशपछि त्यहाँको टोलटोलमा पार्टी कमिटी गठन भएको ओखलढुंगा जिल्लाका तत्कालिन अध्यक्ष नेत्रबहादुर नेम्बाङले जानकारी दिए । त्यस्तै, जिल्लाको मानेभन्ज्याङ, चिसंखुगढी लगायतको गाउँपालिकामा पनि उत्साहजनक रुपमा पार्टी प्रवेश तथा संगठन विस्तार तिब्र बनाएको प्रदेश सदस्य धीरेन्द्र रुम्दाली बताउँछन् ।
सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका आगामी स्थानीय तहमा जित निकाल्ने स्थानीय तहको रुपमा तयार रहेको सोलुखुम्बु जिल्ला अध्यक्ष नरेन्द्र थापामगर दाबी गर्छन । सोलुखुम्बुममा संगठनको अवस्था सुदृढ हुँदै गएकाले आगामी निर्वाचनमा आफूहरु सम्मानजनक अवस्थामा पुग्ने केही समयअघि त्यहाँ आयोजित पार्टी प्रशिक्षणका क्रममा अध्यक्ष मगरले गरे ।
यता, खिजीदेम्बामा गाउँपालिकामा नतिजा निकाल्ने अभियानमा आफूहरु अहोरात्रा खटिरहेको जसपा जिल्ला सचिव पासाङ निमा शेर्पा बताउँछन् । उता खोटाङमा आफ्नै जिल्ला कार्यालय भवन नै बनाएर पार्टी संगठन तिब्र रुपमा अघि बढेको युवा नेता रविन खम्बुले बताए ।
ओखलढुंगामा पत्रकार महासंघको नेतृत्वसमेत जसपा निकट प्रेस मञ्च नेपालले जितेका छन् । देशैभरमध्ये प्रदेश नं. १ मा मञ्चका उपमहासचिव दीपेन्द्र रुम्दालीले केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुपनि पार्टीका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको पार्टी केन्द्रीय सदस्य राजकुमार राई बताउँछन् ।
तराईमधेशमा राम्रो प्रभाव रहेको, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा समेत तिब्र रुपमा जनलहर देखिएपछि अन्य पार्टीले हेर्ने दृष्टिकोण समेत परिवर्तन भएको ओखलढुंगाका अध्यक्ष खेमराज खड्का बताउँछन् । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिँकिँदै जाँदा पार्टी संगठन विस्तारले पाएको तिब्रताले जसपाका नेता कार्यकर्ता उत्साहित भइरहँदा केन्द्रीय राजनीतिमा पार्टीको दुई खेमा र सरकार निर्माण ठोस निर्णय दिन नसक्नुलाई भने कमजोरीको रुपमा हेरेका छन् । पार्टी प्रदेश नं. १ का कोषाध्यक्ष विनोद नेम्बाङले भने “हाम्रो नेतृत्व अहिले कस्तुरीले आफ्नै विना नचिने जस्तो अवस्थामा छ । यसरी पार्टी निर्माणमा घाटा हुन्छ तसर्थ तत्काल कित्ता स्पष्ट गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।”
मेयर हरिप्रसाद अधिकार भन्छन् ‘बुद्धभूमि बनाउन केन्द्रित छौं’